लघुवित्तको शेयरमा धेरै नउच्चालिऔं, मूल्य थाम्न गाह्रो पर्ला ! जनबोली न्यूज नेटवर्क प्रा. लि
लघुवित्तको शेयरमा धेरै नउच्चालिऔं, मूल्य थाम्न गाह्रो पर्ला !
जनबोली/ २ बैशाख, काठमाडौ । केही बर्ष अघि बाणिज्य बैंक, बिकास बैंक र फाईनान्स कम्पनीहरुको शेयर किन्न लगानीकर्ताहरु मरिहत्ते गर्थे । बोनस र हकप्रद शेयर जारी गर्ने भनेपछि त ती कम्पनीहरुको मूल्य छोईसक्नु हुन्थेन । तर पछि समय यस्तो आयो– हकप्रद शेयर जारी गर्ने भनेपछि त्यस्ता कम्पनीहरुको शेयर मूल्य तीब्र रुपमा ओरालो लाग्न थाल्यो र बजारमा शेयर नबिकेर कयौं लगानीकर्ताहरु हैरान बने । जसले त्यतिबेला महंगोमा शेयर किने, बोनस, हकप्रद र नगद खाँदा पनि अहिलेसम्म त्यसको मूल्य हासिल गर्न सकेका छैनन् ।
अहिले लघुवित्तहरुको शेयर मूल्य बढ्ने प्रबृत्ति त्यही रुपमा देखा परेको छ । धेरै लगानीकर्ताले लघुवित्त कम्पनीहरुले आकर्षक प्रतिफल दिने आशमा लगानी बढाउँदै आएका छन् । मेरोलगानी डटकमको विश्लेषण
स्वरोजगार लघुवित्त बिकास बैंक(SLBBL)लाई उदाहरणमा लिएर कुरा गर्दा एक करोड ५७ लाख चुक्ता पूँजी रहेको सो बैंकको शेयर मूल्य हाल दोस्रो बजारमा २ हजार पाँचसय भन्दा माथि छ । जगेडा कोषमा एक करोड असी लाख रुपैयाँ छ भने यस आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ७२ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेर प्रति शेयर आम्दानी ७२ रुपैयाँ कायम गरेको छ । सो बैंकको निस्क्रिय कर्जा अनुपात ०.४८ छ । बेैकले गत बर्षको खुद नाफाबाट २७ प्रतिशत बोनस शेयर र २० प्रतिशत नगद लाभांश बाड्यो भने शत प्रतिशत हकप्रद शेयर दिने प्रस्ताव पारित गरेको छ ।
अर्को तर्फ तीन वटा मूख्य बाणिज्य बैंकहरुले प्रबद्र्दन गरेको स्वावलम्बन लघुवित्त बिकास बैंक(SWBBL)लाई हेरौंः चुक्ता पूँजी २१ करोड ९८ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा रहेको स्वावलम्बन बिकास बैंकको जगेडा कोषमा चुक्ता पूँजीको झण्डै दोब्बर रकम रहेको छ । बैंकले यस आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म १० करोड ९८ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेर प्रति शेयर आम्दानी एक सय रुपैयाँ माथि कायम गरेको छ । सो बैंकको निस्क्रिय कर्जा अनुपात ०.४७ रहेको छ भने शेयरको प्रति कित्ता बजार मूल्य एक हजार ६ सय को हाराहारीमा छ । सो बैंकले गत बर्षको नाफाबाट साढे ४६ प्रतिशत बोनस शेयर र साढे २३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी ७० प्रतिशत लाभांश बाड्यो ।
यी दुईवटा बैंकहरुलाई तुलना गर्दा स्वरोजगार भन्दा स्वालम्बन धेरै बलियो देखिन्छ तर लगानीकर्ताको आँखा स्वरोजगारमै धेरै परेको छ । स्वरोजगारले चुक्ता पूँजी कम भएकाले त्यसलाई बढाउँन धेरै बोनस र हकप्रद दिने आश गर्नु स्वभाविक छ तर यसको शेयर मूल्य आकाशिनुको मूख्य कारण बजारमा साधारण शेयर कम संख्यामा रहनु नै हो । जब कुनै बस्तुको माग बढी र आपुर्ति कम हुन्छ, त्यतिखेर त्यसको मूल्य बढ्नु स्वभाविक छ । स्वरोजगारको शेयर मूल्य गत चैत्र १२ मा २ हजार आठ सयसम्म पुगेर फर्किएको छ । त्यो मूल्यमा शेयर किन्नेहरुले कति प्रतिफल पाउँदा तिरेको मूल्य धान्ला त ? उसले जारी गर्ने एक बराबर एक हकप्रद शेयरले दुई हजार आठ सय रुपैयाँ लगानीको जोखिम बहन गर्छ ? नाफा र जोखिम ब्यवस्थापनको हिसावले निकै बिचारणीय पक्ष छ ।
अर्को एउटा लघुवित्त बिकास बैंकको अबस्था हेरौंः नयाँ नेपाल लघुवित्त बिकास बैंक (NNLB)को चुक्ता पूँजी दुई करोड रुपैयाँ हो । उसको जगेडा कोषमा २५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्रै छ भने चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा १० लाख ३१ हजार रुपैयाँ मात्रै खुद नाफा गरेको छ । यस कम्पनीको निकै चिन्ताको बिषय के हो भने निस्क्रिय कर्जा अनुपात १४ प्रतिशत भन्दा माथि छ र यसै कारणले बैंकले दोस्रो त्रैमासमा २६ लाख रुपैयाँ प्रोभिजन गरेको छ । तर यसको शेयर भाऊ एक हजार एक सयको हाराहारीबाट झरेर अहिले नौ सय ५६ रुपैयाँमा आईपुगेको छ । के कारणले लगानीकर्ताले यस बैंकको शेयरलाई त्यति धेरै मूल्य तिर्ने ? यस आर्थिक बर्षको चौथो त्रैमाससम्ममा बैंकले निस्क्रिय कर्जा अनुपात पाँच प्रतिशत भन्दा तल झारेन भने राष्ट्र बैंकले लाभांश बाड्न स्वीकृति दिनेछैन् । निस्क्रिय कर्जामा सुधार गरे पनि कति धेरै खुद नाफा गर्ला र बोनस तथा नगद लाभांश बाड्ला ? जगेडा कोषबाट दिने आश गर्नु त झनै बेकार छ । एउटै कुरा मात्रै आशा गर्न सकिन्छ– निस्क्रिय कर्जाले थलिएको र राम्रो प्रगति गर्न नसकेको कम्पनीलाई लगानीकर्ताले आफ्नो गोजीबाट रकम हालेर हकप्रद शेयर किनी चुक्ता पूँजी बढाई दिने ।
स्याङजामा मुख्य कार्यालय रहेको कालिका माईक्रोफाईनान्स बिकास बैंक(KMCDB)को चुक्ता पूँजी पाँच करोड रुपैयाँ हो, उस्को जगेडा कोषमा तीन करोड ४७ लाख रुपैयाँ छ । यस बैंकले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमाससम्ममा एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरी प्रति शेयर आम्दानी ६६ रुपैयाँ कायम गरेको छ । कम्पनीको निस्क्रिय कर्जा अनुपात ०.७१ प्रतिशत छ । यस कम्पनीले गत आर्थिक बर्षको खुद नाफाबाट बोनस र हकप्रद शेयर बाँडेन तर आगामी बर्ष हकप्रद र बोनस शेयर बाड्नसक्ने संभावना भने छ । त्यही संभावनाको आश गर्दै लगानीकर्ताहरु त्यस कम्पनीको एक कित्ता शेयरलाई एक हजार एकसय ५० रुपैयाँसम्म हालिरहेका छन् ।
फस्ट माईक्रोफाईनान्स (FMDBL)ले निस्क्रिय कर्जालाई सुन्य प्रतिशतमा राखेर खुद आम्दानी बढाईरहेको छ । निर्धन उत्थान, छिमेक, डिप्रोक्स, नेरुडे, रुरल माईक्रोफाईनान्स, साना किसान राम्रा कम्पनी भए पनि उनीहरुको शेयर मूल्य पनि माथि नै छ । त्यस्तै समिट, लक्ष्मी, मिथिला लघुवित्त नयाँ कम्पनीहरु भएकाले कारोबार बिस्तारकै चरणमा छन् ।
अहिले लघुवित्त बिकास बैंकका शेयरहरुमा लगानीकर्ताहरुको अनौठो आकर्षण देखिन्छ । तत्काल कुनै लाभांश दिने संभावना नभएका र भर्खर संचालनमा आएका कम्पनीको शेयर मूल्य पनि सात–आठ सय रुपैयाँ भन्दा माथि छ । बजारमा ती कम्पनीको शेयर संख्या कम हुनु र लघुवित्त भनेका सुनको फूल पार्ने कुखुरी हुन् भन्ने बुझ्नाले लगानीकर्ताहरु जोखिमको हिसाबै नगरी लघुवित्तको शेयरमा लगानी बढाईरहेका छन् ।
प्राथमिक शेयर आबेदनमा पनि उस्तै आकर्षण छ । जनउत्थान लघुवित्तको ९० हजार कित्ताको लागि भएको आब्हानमा तीन सय ४७ गुणा बढीको आबेदन परी चिठ्ठा प्रथाले शेयर बांडफाँड गर्न पर्दाको अबस्थाले लगानीकर्ताको आकर्षण झल्काउँछ । पछिल्लो समय साधारण शेयर आब्हान भएका मिर्मिरे, आईएलएफसीओ र बिजय लघुवित्तका शेयरमा भएको आबेदनमा पनि उस्तै प्रबृत्ति दोहोरिए ।
लगानीकर्ताहरुमा लघुवित्तप्रतिको आकर्षण एउटा पक्ष छ भने अर्को तर्फ राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति प्राप्त गरी संचालनमा रहेका मेरो माईक्रो फाईनान्स, महिला सहयात्रा, क्लिन भिलेज माईक्रो फाईनान्स जस्ता धेरै कम्पनीहरुले साधारण शेयर निस्काशन गर्दैछन् । राष्ट्र बैंकबाट सिमित बैंकिङ कारोबार गर्न स्वीकृति पाएका १८ वटा गैरसरकारी संस्थाहरु यही असार मसान्तसम्म कम्पनीमा परिवर्तन भई सर्वसाधारणमा शेयर जारी गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्ने छ । यसरी दोस्रो बजारमा एक पछि अर्को लघुवित्त कम्पनी थपिने क्रम तीब्र बन्नु, उनीहरुले जारी गर्ने हकप्रद र बोनस शेयरको संख्या बढ्नु र कम्पनीहरुबीचको प्रतिस्पर्धाले कर्जाको ब्याजदर संकुचन भई नाफा घट्ने संभावना हुनुले लघुवित्त भन्दैमा उचालिएर शेयर किन्नु जोखिमपूर्ण हुँदै गएको छ । दुई बर्ष अघि दुई – तीन सय रुपैयाँको हाराहारीमा पाईने लघुवित्त बिकास बैंकहरुको शेयर मूल्य अहिले १४ गुणासम्मले आकाशिएको अबस्था छ ।
एक दुई बर्ष लाभांशै बाड्न नसक्ने कम्पनीमा लगानी गर्नु भन्दा अहिले मध्यमस्तरका बाणिज्य बैंकहरुमा लगानी गर्नु निकै सुरक्षित उपाय हुनसक्छ । चार– पाँच सय रुपैयाँमै राम्रा बाणिज्य बैंकको शेयर पाईन्छ भने जोखिमपूर्ण शेयरहरुमा लगानी किन बढाउँने ? कुमारी, सनराईज, सिटिजन, माछापुच्छ्रे, सानिमा, सिद्दार्थ, प्राईम, सेन्चुरी, ग्लोबलआईएमई, एनसीसी जस्ता राम्रा बाणिज्य बैंकहरुमा लगानी गर्ने हो भने माईक्रोफाईनान्सको शेयरको तुलनामा धेरै शेयर आउने, ढुक्कले कम्तिमा २० प्रतिशतसम्म लाभांश पाउनसक्ने, बैंकमै धितो राखेर कर्जा लिँदा पनि यी शेयरहरु सजिलै धितो स्वीकार हुने, जोखिम कम हुने र शेयर बजारमा उछाल आएको अबस्थामा मूल्यमा राम्रै बढोत्तरी हुने प्रशस्त संभावना रहेको छ ।
के उसो भए लघुवित्तका शेयरमा लगानी गर्दै नगर्ने हो त भन्ने प्रश्नमा जोखिम बहन र नाफाको तुलनामा मूल्य निकै धेरै भयो भन्नेसम्म मात्रै हो । लघुवित्तहरु गरिबी निवारणका सशक्त माध्यम हुन् र सरकारले पनि यही मान्यतामा लघुवित्तमार्फत विपन्न बर्ग कर्जाको रकम परिचालन गर्न बाणिज्य बैंकहरुलाई प्रोत्साहित गरेको छ । यस्ता कम्पनीहरुले पूँजी बढाएर सकेसम्म धेरै विपन्न बर्गमा पहुँच कायम गर्न सर्वसाधारणले लगानी थप्नै पर्छ । भर्खर साधारण शेयर जारी गरेर बामे सर्न लागेका कम्पनीहरुको शेयर मूल्य बढीमा तीन–चारसय रुपैयाँसम्म हुनुुपर्ने हो तर उचालिएर एक हजार रुपैयाँ काटेपछि जोखिमपूर्ण त हुने नै भयो । साधारण शेयरमा आबेदन गर्दा कुनै जोखिम नभए पनि दोस्रो बजारमा खरिद गर्दा भने विचार पुर्याउँनै पर्छ । लघुवित्त भन्दैमा सबै कम्पनीको शेयर उत्तिकै मूल्यवान हुँदैनन्, आँखा चिम्लेर लगानी गर्नु हुँदैन ।